Headline Nepal | कर्णाली प्रदेश बिवाद : प्रचण्डसँग कँडेल समूहको भेटवार्ता, के सहमती भयो ?
कर्णाली प्रदेश बिवाद : प्रचण्डसँग कँडेल समूहको भेटवार्ता, के सहमती भयो ?
३० असोज, काठमाडौं - कर्णाली प्रलेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेसगर्ने यमलाल कँडेल समूहले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल प्रचण्डलाई भेटेको छ । प्रचण्डलाई भेट्न कँडेल समूह आज बिहान नौ बजे खुमलटार पुगेको थियो ।
भेटमा प्रचण्डलाई कर्णाली प्रदेशमा भएको विवादबारे जानकारी गराइएको छ । कँडेलसहित माया प्रसाद शर्मा र गुलाबजंग शाह खुमलटार पुगेका थिए । मुख्यमन्त्री शाही समूहले भने बिहीबार नै प्रचण्ड र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग भेटेर विकसित घटनाक्रमबारे जानकारी गराएका थिए ।
मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएपछि नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले कर्णालीका मुख्यमन्त्री नेताहरुलाई काठमाडौं बोलाएका थिए । मुख्यमन्त्री शाही पक्षका नेताहरु बुधबार नै काठमाडौं आएका थिए भने कँडेल पक्षका नेताहरु बिहीबार आएका हुन् ।